240p | 28.6MB
သက်တော် ၉၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး ဒုတိယမြောက် အဲလိစ်ဇဘက်သ် ဟာ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရလ ထဲမှာပဲ နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့်သွားပါပြီ။ ဘုရင်မကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေ အပါအဝင် ဗြိတိန်ပြည်သူတွေက ဘယ်လို သဘောထားကြလဲ။ ဘာတွေ ပြောဆိုထားကြလဲ။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ မခင်ဖြူထွေး စုစည်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
သက်တော် ၉၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး ဒုတိယမြောက် အဲလိစ်ဇဘက်သ် ဟာ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပဲ နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့်သွားပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်က နန်းသက်အရှည်ဆုံး ဘုရင်၊ ဘုရင်မတွေထဲ ထိပ်ပိုင်းနေရာက ပါဝင်သလို၊ ဗြိတိန်သမိုင်းမှာတော့ သူ့လောက် နန်းသက်ရော သက်တော်ပါ ရှည်တဲ့ဘုရင်မ မရှိသေးပါဘူး။ ခုလို နန်းသက် ၇၀ ပြည့်ချိန်မှာပဲ တော်ဝင် မိသားစု အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်သ် နဲ့ပတ်သက်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေ အပါအဝင် ဗြိတိန်ပြည်သူတွေက ဘယ်လို သဘောထားကြလဲ။ ဘာတွေ ပြောဆိုထားကြလဲ။ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ အနာဂတ် အလားအလာ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာတွေကို အေပီနဲ့ ရိုက်တာသတင်းတွေကို စုစည်းပြီး ဒီသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ မခင်ဖြူထွေး စုစည်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
၁၉၅၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှာ ခမည်းတော် ဆဌမမြောက် ဂျော့ဂ်ျ ဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံသွားတဲ့အတွက် ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီး ဒုတိယမြောက် အဲလိစ်ဇဘက်သ်... ထီးနန်း အရိုက်အရာ ဆက်ခံလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် တော်ဝင်နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဗြိတိန်သမိုင်း မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ အတွင်း ခုလို အနှစ် ၇၀ အထိ ထီးနန်းအရိုက်အရာ ဆက်ခံနိုင်ခဲ့သူ မရှိဖူးသေးသလို၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာလည်း ဒီလို နန်းသက် ရှည်တဲ့သူ အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗြိတိန် တော်ဝင်မိသားစု အတွက်တော့ ဘုရင်မကြီး နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့်သွားတာက ထူးခြားတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
''ဗြိတိန် ဘုရင်မ တယောက်ရဲ့ နန်းသက် ၇၀ ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘုရင်မကြီးက ထူးထူးခြားခြား သမိုင်း စံချိန်ချိုးလိုက်တာပါပဲ။ သူ့ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် ထီးနန်း အရိုက်အရာ ဆက်ခံခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအထိ ဗြိတိန်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရင် နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘုရင်မကြီး ကတော့ ခုထိ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
လန်ဒန်တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ Anna Whitelock ပြောသွားတာပါ။ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်သ် ဟာ သူ့ရဲ့ နန်းသက် နှစ် ၇၀ ကာလအတွင်း ခေတ်စနစ် အပြောင်းအလဲတွေကြား အဆိုး အကောင်း အခြေအနေ မျိုးစုံကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်ဖြတ်နိုင်သူ အဖြစ် လူသိများပါတယ်။ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်တပါး ကျင့်သုံးရတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့အညီ အကောင်းဆုံး ကျင့်ကြံ နေထိုင်ခဲ့သလို၊ နိုင်ငံရေးမှာ ဘက်လိုက်မှု ကင်းကင်း ရပ်တည်သူ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျပ်အတည်း ကာလတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေ တစုတစည်းတည်း ရှိအောင် စိတ်ခွန်အားနဲ့ ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်သူအဖြစ် အများက အသိအမှတ် ပြုကြပါတယ်။ ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်သ် ဟာ အင်မတန်ကို ထူးခြားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှားရှားပါးပါး ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပါလို့ သမိုင်းပညာရှင် Hugo Vickers က ပြောပါတယ်။
"ဗြိတိန်ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကာလတလျှောက်လုံး သူဟာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်၊ ရည်ရည်မွန်မွန်နဲ့ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲမှုမရှိ ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက လူတိုင်း သူ့ဆီက သင်ယူသင့်တဲ့ အရာပါ။ အနှစ် ၇၀ လုံး ဒီလို ထိန်းသိမ်းနေထိုင် နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သူ့လို လုပ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အင်မတန်ကို ထူးခြားတဲ့ သူမျိုးပါ။ ဒါကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။”
ဘုရင်မ တယောက်ဖြစ်လို့ ထောင်လွှား မောက်မာတာမျိုး မရှိဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နေထိုင်ပြီး ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေတွေကို နားလည် လက်ခံ ကျင့်သုံးနိုင်သူ လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေက အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗြိတိန် သမိုင်းမှာ တခြားသော နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မတူဘဲ လူအများစုရဲ့ လေးစား ချစ်ခင်မှုကို အချိန်အကြာကြီး ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင်မိသားစု သမိုင်းကြောင်းတွေကို နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ သမိုင်းပညာရှင် Robert Lacey ကလည်း ဘုရင်မကြီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခုလို သုံးသပ် ပြောဆိုပါတယ်။
“သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ စနစ်တခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလို့ ရှုမြင်တဲ့သူပါ။ မောက်မာ ထောင်လွှားခြင်း မရှိပါဘူး။ တော်ဝင် မိသားစုတွေထဲမှာ ငါတို့သာ အရေးပါဆုံး၊ ငါတို့သာ အရာရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတချို့ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဗြိတိန်ဘုရင်တွေ အားလုံး ကတော့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် နေခဲ့ကြသူတွေပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ထက် ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်ပြီး လူတယောက်ချင်းစီထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံထားကြသူတွေပါ။ ဘုရင်မကြီး ဟာလည်း အဲ့ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါပဲ။ ဆက်ပြီးတာ့လည်း သူ အဲ့လိုပဲ နေသွားမှာပါ။ အခု နှစ် ၇၀ ရတုမှာလည်း ပြည်သူတွေက ဒါကို ဂုဏ်ယူ ဆင်နွှဲကြမှာပါ။ တော်ဝင်ဘုရင်မကြီးရဲ့ ခမ်းနား ထည်ဝါမှု၊ သူ့ရဲ့ ရပ်တည် နေထိုင်မှုနဲ့ အလေးထားမှုတွေ၊ တာဝန်ကို အကောင်းဆုံး ထမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ဂုဏ်ပြု ဆင်နွှဲကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်သ် အနေနဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ နောက်ထပ် နှစ်အနည်းငယ်အထိ ထီးနန်းမှာ ဆက် ရှိသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ရှိ နန်းသက်အရှည်ဆုံး ပြင်သစ်ဘုရင် ၁၄ ယောက်မြောက် လူဝီကို ကျော်ပြီး ကမ္ဘာ့နန်းသက် အရှည်ဆုံး ဘုရင်မတပါး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ပြင်သစ် လူဝီဘုရင်က နန်းသက် ၇၂ နှစ်ကျော် ရှိခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့နန်းသက် အရှည်ဆုံး ဘုရင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က နတ်ရွာစံခဲ့တဲ့ ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘောအဒူရာဒက်ခ်ျ က နန်းသက် နှစ် ၇၀ နဲ့ ၁၂၆ ရက် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ နန်းသက်အရှည်ဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်ကို နောက်ထပ် နှစ်အနည်းငယ် ထီးနန်းမှာ ဆက်ရှိနေဖို့ မျှော်လင့်သူတွေလည်း အများအပြား ရှိသလို၊ ဘုရင်မကြီး မရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်း တော်ဝင်မိသားစု အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ် ပူပန်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဘုရင်မကြီးကို လေးစားချစ်ခင်သူတွေ များပေမဲ့၊ တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ မေးခွန်းထုတ် ဝေဖန်မှုတွေက ခေတ်အဆက်ဆက် ဆိုသလို ရှိလာခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက သားတော်ကြီး အိမ်ရှေ့မင်းသား ချားလ်စ် နဲ့ ခုချိန်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ ကနေ၊ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာလည်း သားလတ် မင်းသား အန်ဒရူးက အရွယ်မရောက် သေးတဲ့ မိန်းခလေး တယောက်ကို မဖွယ်မရာ လိင် ဆက်ဆံခဲ့တယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံထားရတာ ရှိသလို၊ မြေးတော် မင်းသား ဟယ်ရီ နဲ့ ကြင်ယာတော် Meghan တို့ တော်ဝင်မိသားစုကနေ ခွဲထွက် သွားခဲ့တာအပြင်၊ တော်ဝင်မိသားစုတွင်း လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ မင်းသမီး Meghan က ပြောဆိုထားတာတွေလို အများ စောင့်ကြည့် ဝေဖန်စရာ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိနေတာပါ။
တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကုန် ဒီဇင်ဘာလက လုပ်ခဲ့တဲ့ လူထုစစ်တမ်း တခုမှာတော့ စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်သူ ၈၃ % အများစုက ထောက်ခံတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချိန်တည်းမှာလည်း ဘုရင်မကြီး နေရာမှာ သားတော် အိမ်ရှေ့စံ ချားလ်စ် မင်းသား အရိုက်အရာ ဆက်ခံမှာကို အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေကတော့ လက်မခံချင် ကြပါဘူး။ ဝင်ဆာမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် Margrux Butler က ခုလို ပြောပါတယ်။
“တော်ဝင်မိသားစု ရှိခြင်း မရှိခြင်းအပေါ် ယေဘုယျအားဖြင့် ခံစားချက် သိပ်မရှိပေမဲ့ ချားလ်စ်မင်းသားနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အငြင်းပွားစရာ တချို့ ရှိပါတယ်။ တခြား လူငယ်တွေ အများအပြားလည်း ဒီလိုပဲ ခံစားရမှာပါ။ လူကြီးတွေ ကတော့ ဒီလောက် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ စကားပြောဖူးတဲ့ သူတွေထဲမှာတော့ ချားလ်စ် ကို ကြိုက်တဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျမကတော့ ဆောရီးပါ။ လက်မခံပါဘူး။”
လန်ဒန်မြို့သား Jacob Appirah ကတော့ ဗြိတိန်မှာ တော်ဝင်မိသားစု ဆက် ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည် ဖြစ်စေ သူ့အတွက်တော့ ဘာမှ မထူးခြားဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
"ကျနော့်အတွက်ကတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲ ကျနော်တို့အပေါ် သက်ရောက်မှု တစုံတရာ ရှိစေမယ့် လုပ်ရပ်မျိုး၊ သူ့ကြောင့် တင့်တယ် သွားရတယ် ဆိုတာမျိုး ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ သူ ရှိရှိ မရှိရှိ ကျနော် ကတော့ ဂရု မစိုက်ပါဘူး။”
ဒါပေမဲ့ ဘုရင်မကြီးနဲ့ တော်ဝင်မိသားစု ရှိနေတဲ့အတွက် ဗြိတိန်ကို တခြား နိုင်ငံတွေနဲ့မတူ ထူးခြားစေပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက်ပါ အကျိုးအမြတ် ရှိစေတယ်လို့မြင်တဲ့ လူငယ်တချို့လည်း ရှိပါတယ်။
“တော်ဝင်မိသားစု ရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ကောင်းတာတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယူကေရဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ် အများကြီး ရစေတာ ရှိသလို၊ တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ သမိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျမကတော့ တိုးတက်တဲ့ အမြင်နဲ့ ကြည့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖျက်လိုက်ဖို့ ဆိုတာမျိုးတော့ သဘောမတူပါဘူး။”
တော်ဝင်မိသားစု သတင်းတွေ ဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ HELLO! မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ Emily Nash ကလည်း ဗြိတိန်မှာ ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်သ် လို ခန့်ညားထည်ဝါပြီး လေးစားဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းတဲ့ ဘုရင်တပါး ရှိနေတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာမှု ရစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ဘုရင်မကြီး ရှိနေတဲ့အတွက် လူတွေ စိတ်ချမ်းသာမှု ရစေတယ်လို့ ကျမကတော့ ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တည်ရှိမှုက ကျမတို့ အများစုရဲ့ သက်တမ်းထက်ကို ပိုပါတယ်။ ကျမတို့ အားလုံး ဘဝတွေ အတွက် သူ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေ၊ မငြိမ်သက်တဲ့ အခါမျိုးတွေတိုင်းမှာ သူက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းဆို သူ့အတွက်က သူ့ကို ထောက်ခံမယ့် မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ မျက်နှာကြည့်နေရတဲ့သူမျိုး မဟုတ်သလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင်၊ ဓာတ်ပြား စသဖြင့် အောင်မြင်မှု အရှိန် ဆက်ထိန်းနေရတဲ့ သူမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်သင့်တာကိုပဲ လုပ်တဲ့သူပါ။ ငိုပြ ရယ်ပြ ဒရမ်မာတွေ မလုပ်ဘဲ ကိုယ့်တာဝန်ကို မညည်းမညူ ထမ်းရွက်တဲ့ သူမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လဲ လူတွေက သူ့ကို လေးစားချစ်ခင်ကြတာပါ။”
တော်ဝင်မှုသားစု တည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ လူငယ်တွေကြား မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ရှိတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း၊ လူကြီး လူလတ်ပိုင်း အရွယ်တွေကြားမှာတော့ ဘုရင်မကြီးနဲ့အတူ တော်ဝင်မိသားစုကို ထောက်ခံသူတွေက အခိုင်အမာ ရှိနေဆဲပဲလို့ ပြောရမှာပါ။
“ကျနော် ကတော့ တော်ဝင်မိသားစုကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော့် အသက်အရွယ်နဲ့ ဒီအခြေအနေမှာ နေသားကျနေတာ၊ ဒီစနစ်အတိုင်း ကြီးပြင်း လာခဲ့တာတွေကြောင့် တော်ဝင်မိသားစုကို လေးစားပါတယ်။ လက်ရှိမှာ York နယ်စား (မင်းသား Andrew) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ မင်းသား ဟယ်ရီနဲ့ မေဂန် တို့နဲ့ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေ တော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာက ဒီတော်ဝင်မိသားစုဟာ ကျနော်တို့နဲ့ နှစ်ပေါင်း ရာတွေနဲ့ချီ ရှိခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။ ဒီ့ထက် ပိုရှိနေလို့လည်း ရသေးတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ထင်ပါတယ်။”
အသက် ၇၀ အရွယ် ဘာမင်ဟန် မြို့သား Bromley Johns ပြောသွားတာပါ။ အလားသူ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် နောက်ထပ် ဘာမင်ဟန်မြို့သား တဦးဖြစ်တဲ့ Richard Brotherton ကလည်း ဘုရင်မကြီး ကံကုန်သွားရင်တောင် တော်ဝင်မိသားစု ကတော့ ဆက်ရှိနေ သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"တချိန်က ခမည်းတော်ရဲ့ အရိုက်အရာကို ဘုရင်မကြီး ဆက်ခံ ခဲ့သလိုပဲ၊ အခု ချားလ်စ် မင်းသားက ဘုရင်မကြီးရဲ့ အရိုက်အရာကို ဆက် ခံရမှာပါ။ အဲ့ဒီလို ဆက်ခံရမယ့်အချိန်မှာ သူ အသက်ရှင်လျက် ဆက်ရှိနေဦးမယ် ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။”
ဘုရင်မကြီး သက်တော် ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ အိမ်ရှေ့စံ ချားလ်စ်မင်းသား ထီးနန်း ဆက်ခံဖို့အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ ကတော့ အခု ကတည်းက ရှိနေပါပြီ။ မင်းသား ချားလ်စ် ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကြင်ယာတော် ကမီးလာ ကို မိဘုရားအဖြစ် တင်မြှောက်ဖို့မှာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ နန်းတွင်းဥပဒေအရ လက်မခံတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေသေးပေမဲ့လို့၊ ဘုရင်မကြီးကတော့ သူ့ သဘောဆန္ဒ ပြောရရင် Cornwell မြို့စားကတော် ကမီးလာ ကို မိဘုရား တင်မြှောက်စေချင်ပါတယ်လို့ သူ့ရဲ့ နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့်ချိန်မှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ချားလ်စ်မင်းသားနဲ့ ကြင်ယာတော် ကမီးလာတို့ အရပ်ဘက် ဥပဒေနဲ့အညီ လက်ထပ်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ တော်ဝင်နန်းတွင်း ဥပဒေအရ သူတို့နှစ်ဦး ထိမ်းမြားမှုက တရားမဝင်တာကြောင့် ချားလ်စ်မင်းသား အနေနဲ့ ဘုရင်ဖြစ်လာရင်တောင် ကြင်ယာတော် ကမီးလာကို မိဘုရားမြှောက်ဖို့မှာ အဟန့်အတားတွေ ရှိနေတာပါ။
တော်ဝင်မိသားစု အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိနေပါစေ၊ လောလောဆယ်မှာတော့ နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့်သွားတဲ့ ဘုရင်မကြီး အဲလ်စ်ဇဘက်သ် အတွက် ဂုဏ်ပြု အခမ်းအနားတွေကို ဒီနှစ် ဇွန်လထဲမှာ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပသွားဖို့ တော်ဝင်မိသားစုတွေ ရော၊ ဘုရင်မကြီးကို ချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ ပြည်သူတွေရော ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဒီလို ပြင်ဆင်နေကြသူတွေ ထဲမှာ Windsor & Eton ဘီယာချက်စက်ရုံ ညွှန်ကြားရေးမှူး Will Calvert လည်း ပါ ပါတယ်။
"သေချာတာကတော့ ဒါက ဝင်ဆာ နန်းတော်တခုတည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခမ်းအနား မဟုတ်ပါဘူး။ ဝင်ဆာက အဓိက ကျတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအခမ်းအနားဟာ တနိုင်ငံလုံး၊ ဓနသဟာရ ပြည်ထောင် အားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ လာမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ သတိရနေစေမယ့် အခမ်းအနားတွေ ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြရမှာပါ။”
နန်းသက် နှစ် ၇၀ ပြည့် အတိပြည့်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ တုန်းကလည်း ဘုရင်မကြီးအတွက် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား တရပ်ကို အိမ်ရှေ့မင်းသား ချားလ်စ်က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းက အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဘုရင်မကြီးရဲ့ အများအကျိုးဆောင် ရည်တည်မှုတွေ အတွက် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ တော်ဝင်မိသားစုအတွင်း ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိနေပါစေ… နန်းသက် နှစ် ၇၀ ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ဘုရင်မကြီး အဲလိစ်ဇဘက်သ် ကိုတော့ ဗြိတိန်ပြည်သူ အများအပြားက ကြည်ညို လေးစား အားထားကြဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲရပ်နားခွင့် ပြုပါရှင်။ ကျမ ခင်ဖြူထွေးပါ။
နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့သှားတဲ့ ဗွိတိနျဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ (အမြိုးသမီးကဏ်ဍ)
သကျတျော ၉၅ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ဗွိတိနျဘုရငျမကွီး ဒုတိယမွောကျ အဲလိဈဇဘကျသျ ဟာ ဒီနှဈ ဖဖေျောဝါရီလထဲမှာပဲ နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့သှားပါပွီ။ ကမ်ဘာပျေါက နနျးသကျအရှညျဆုံး ဘုရငျ၊ ဘုရငျမတှထေဲ ထိပျပိုငျးနရောက ပါဝငျသလို၊ ဗွိတိနျသမိုငျးမှာတော့ သူ့လောကျ နနျးသကျရော သကျတျောပါ ရှညျတဲ့ဘုရငျမ မရှိသေးပါဘူး။ ခုလို နနျးသကျ ၇၀ ပွညျ့ခြိနျမှာပဲ တျောဝငျ မိသားစု အနာဂတျနဲ့ပတျသကျလို့ မေးခှနျးထုတျမှုတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ နဲ့ပတျသကျလို့ သမိုငျးပညာရှငျတှေ အပါအဝငျ ဗွိတိနျပွညျသူတှကေ ဘယျလို သဘောထားကွလဲ။ ဘာတှေ ပွောဆိုထားကွလဲ။ တျောဝငျမိသားစုရဲ့ အနာဂတျ အလားအလာ ဘာတှေ ဖွဈလာနိုငျသလဲ ဆိုတာတှကေို အပေီနဲ့ ရိုကျတာသတငျးတှကေို စုစညျးပွီး ဒီသီတငျးပတျ အမြိုးသမီးကဏ်ဍမှာ မခငျဖွူထှေး စုစညျး တငျဆကျထားပါတယျ။
၁၉၅၂ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၆ ရကျနမှေ့ာ ခမညျးတျော ဆဌမမွောကျ ဂြော့ဂျြ ဘုရငျကွီး နတျရှာစံသှားတဲ့အတှကျ ဗွိတိနျ ဘုရငျမကွီး ဒုတိယမွောကျ အဲလိဈဇဘကျသျ... ထီးနနျး အရိုကျအရာ ဆကျခံလာခဲ့တာ အခုဆိုရငျ တျောဝငျနနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့သှားခဲ့ပါပွီ။ ဗွိတိနျသမိုငျး မှာတော့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁,၀၀၀ အတှငျး ခုလို အနှဈ ၇၀ အထိ ထီးနနျးအရိုကျအရာ ဆကျခံနိုငျခဲ့သူ မရှိဖူးသေးသလို၊ ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာလညျး ဒီလို နနျးသကျ ရှညျတဲ့သူ အနညျးအကဉျြးသာ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဗွိတိနျ တျောဝငျမိသားစု အတှကျတော့ ဘုရငျမကွီး နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့သှားတာက ထူးခွားတဲ့ သမိုငျးမှတျတိုငျတခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
''ဗွိတိနျ ဘုရငျမ တယောကျရဲ့ နနျးသကျ ၇၀ ဆိုတာ ဘယျတုနျးကမှ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘုရငျမကွီးက ထူးထူးခွားခွား သမိုငျး စံခြိနျခြိုးလိုကျတာပါပဲ။ သူ့ အသကျ ၂၀ ကြျောအရှယျ ထီးနနျး အရိုကျအရာ ဆကျခံခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ပွညျ့လှနျနှဈတှအေထိ ဗွိတိနျကို ပွနျပွောငျးကွညျ့ရငျ နှဈပေါငျး ၇၀ အတှငျးမှာ အပွောငျးအလဲတှေ အမြားကွီး ဖွဈခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဘုရငျမကွီး ကတော့ ခုထိ ရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။”
လနျဒနျတက်ကသိုလျက ပါမောက်ခ Anna Whitelock ပွောသှားတာပါ။ ဗွိတိနျဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ ဟာ သူ့ရဲ့ နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ကာလအတှငျး ခတျေစနဈ အပွောငျးအလဲတှကွေား အဆိုး အကောငျး အခွအေနေ မြိုးစုံကို တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ အောငျအောငျမွငျမွငျ ကြျောဖွတျနိုငျသူ အဖွဈ လူသိမြားပါတယျ။ စညျးမဉျြးခံဘုရငျတပါး ကငျြ့သုံးရတဲ့ စံနှုနျးတှနေဲ့အညီ အကောငျးဆုံး ကငျြ့ကွံ နထေိုငျခဲ့သလို၊ နိုငျငံရေးမှာ ဘကျလိုကျမှု ကငျးကငျး ရပျတညျသူ၊ တိုငျးပွညျရဲ့ အကပျြအတညျး ကာလတှမှောလညျး ပွညျသူတှေ တစုတစညျးတညျး ရှိအောငျ စိတျခှနျအားနဲ့ ဦးဆောငျမှု ပေးနိုငျသူအဖွဈ အမြားက အသိအမှတျ ပွုကွပါတယျ။ ဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ ဟာ အငျမတနျကို ထူးခွားတဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှားရှားပါးပါး ပုဂ်ဂိုလျတဦးပါလို့ သမိုငျးပညာရှငျ Hugo Vickers က ပွောပါတယျ။
"ဗွိတိနျရဲ့ ပွောငျးလဲလာတဲ့ ကာလတလြှောကျလုံး သူဟာ တညျတညျငွိမျငွိမျ၊ ရညျရညျမှနျမှနျနဲ့ ဖောကျပွနျ ပွောငျးလဲမှုမရှိ ဦးဆောငျမှု ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါက လူတိုငျး သူ့ဆီက သငျယူသငျ့တဲ့ အရာပါ။ အနှဈ ၇၀ လုံး ဒီလို ထိနျးသိမျးနထေိုငျ နိုငျဖို့ ဆိုတာ ဘယျသူမှ သူ့လို လုပျနိုငျမယျ မထငျပါဘူး။ သာမနျမဟုတျတဲ့ အငျမတနျကို ထူးခွားတဲ့ သူမြိုးပါ။ ဒါကို အသိအမှတျပွု ဂုဏျပွုသငျ့ပါတယျ။”
ဘုရငျမ တယောကျဖွဈလို့ ထောငျလှား မောကျမာတာမြိုး မရှိဘဲ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး နထေိုငျပွီး ခတျေနဲ့အညီ ပွောငျးလဲလာတဲ့ အခွအေနတှေကေို နားလညျ လကျခံ ကငျြ့သုံးနိုငျသူ လို့ သမိုငျးပညာရှငျတှကေ အသိအမှတျပွု ပွောဆိုကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဗွိတိနျ သမိုငျးမှာ တခွားသော နိုငျငံ့ ခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ မတူဘဲ လူအမြားစုရဲ့ လေးစား ခဈြခငျမှုကို အခြိနျအကွာကွီး ရရှိထားသူ ဖွဈပါတယျ။ တျောဝငျမိသားစု သမိုငျးကွောငျးတှကေို နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ သမိုငျးပညာရှငျ Robert Lacey ကလညျး ဘုရငျမကွီးနဲ့ ပတျသကျလို့ ခုလို သုံးသပျ ပွောဆိုပါတယျ။
“သူဟာ သူ့ကိုယျသူ စနဈတခုရဲ့ အစိတျအပိုငျးလို့ ရှုမွငျတဲ့သူပါ။ မောကျမာ ထောငျလှားခွငျး မရှိပါဘူး။ တျောဝငျ မိသားစုတှထေဲမှာ ငါတို့သာ အရေးပါဆုံး၊ ငါတို့သာ အရာရာ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ လူတခြို့ ရှိကောငျးရှိပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ အောငျမွငျတဲ့ ဗွိတိနျဘုရငျတှေ အားလုံး ကတော့ လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈအောငျ နခေဲ့ကွသူတှပေါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ထကျ ပိုပွီး ကွီးမားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတခုရဲ့ အစိတျအပိုငျး တခုဖွဈတယျ ဆိုတာကို နားလညျပွီး လူတယောကျခငျြးစီထကျ ပိုပွီး အရေးကွီးတဲ့ အရာတှေ ရှိတယျဆိုတာကို လကျခံထားကွသူတှပေါ။ ဘုရငျမကွီး ဟာလညျး အဲ့ဒီလို ပုဂ်ဂိုလျမြိုးပါပဲ။ ဆကျပွီးတာ့လညျး သူ အဲ့လိုပဲ နသှေားမှာပါ။ အခု နှဈ ၇၀ ရတုမှာလညျး ပွညျသူတှကေ ဒါကို ဂုဏျယူ ဆငျနှဲကွမှာပါ။ တျောဝငျဘုရငျမကွီးရဲ့ ခမျးနား ထညျဝါမှု၊ သူ့ရဲ့ ရပျတညျ နထေိုငျမှုနဲ့ အလေးထားမှုတှေ၊ တာဝနျကို အကောငျးဆုံး ထမျးဆောငျနိုငျမှုတှကေို ဂုဏျပွု ဆငျနှဲကွမှာ ဖွဈပါတယျ။”
ဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ အနနေဲ့ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ နောကျထပျ နှဈအနညျးငယျအထိ ထီးနနျးမှာ ဆကျ ရှိသှားနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ လကျရှိ နနျးသကျအရှညျဆုံး ပွငျသဈဘုရငျ ၁၄ ယောကျမွောကျ လူဝီကို ကြျောပွီး ကမ်ဘာ့နနျးသကျ အရှညျဆုံး ဘုရငျမတပါး ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောကွပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ပွငျသဈ လူဝီဘုရငျက နနျးသကျ ၇၂ နှဈကြျော ရှိခဲ့တာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့နနျးသကျ အရှညျဆုံး ဘုရငျဖွဈပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈက နတျရှာစံခဲ့တဲ့ ထိုငျးဘုရငျ ဘူမိဘောအဒူရာဒကျချြ က နနျးသကျ နှဈ ၇၀ နဲ့ ၁၂၆ ရကျ ရှိပွီး ကမ်ဘာ့ ဒုတိယ နနျးသကျအရှညျဆုံးပါ။ ဒါကွောငျ့ ဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျကို နောကျထပျ နှဈအနညျးငယျ ထီးနနျးမှာ ဆကျရှိနဖေို့ မြှျောလငျ့သူတှလေညျး အမြားအပွား ရှိသလို၊ ဘုရငျမကွီး မရှိတော့တဲ့ နောကျပိုငျး တျောဝငျမိသားစု အနာဂတျနဲ့ ပတျသကျလို့ စိုးရိမျ ပူပနျမှုတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
ဘုရငျမကွီးကို လေးစားခဈြခငျသူတှေ မြားပမေဲ့၊ တျောဝငျမိသားစုနဲ့ ပတျသကျလာရငျတော့ မေးခှနျးထုတျ ဝဖေနျမှုတှကေ ခတျေအဆကျဆကျ ဆိုသလို ရှိလာခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၀ ပွညျ့လှနျနှဈတှကေ သားတျောကွီး အိမျရှမေ့ငျးသား ခြားလျဈ နဲ့ ခုခြိနျမှာ ကှယျလှနျသှားပွီ ဖွဈတဲ့ မငျးသမီး ဒိုငျယာနာတို့ရဲ့ အိမျထောငျရေး ပွဿနာ ကနေ၊ နောကျပိုငျးကာလတှမှောလညျး သားလတျ မငျးသား အနျဒရူးက အရှယျမရောကျ သေးတဲ့ မိနျးခလေး တယောကျကို မဖှယျမရာ လိငျ ဆကျဆံခဲ့တယျ ဆိုပွီး စှပျစှဲခံထားရတာ ရှိသလို၊ မွေးတျော မငျးသား ဟယျရီ နဲ့ ကွငျယာတျော Meghan တို့ တျောဝငျမိသားစုကနေ ခှဲထှကျ သှားခဲ့တာအပွငျ၊ တျောဝငျမိသားစုတှငျး လူမြိုးရေး ခှဲခွားမှုတှေ ရှိနတေယျလို့ မငျးသမီး Meghan က ပွောဆိုထားတာတှလေို အမြား စောငျ့ကွညျ့ ဝဖေနျစရာ ဖွဈရပျတှေ ရှိနတောပါ။
တျောဝငျမိသားစုနဲ့ပတျသကျလို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈကုနျ ဒီဇငျဘာလက လုပျခဲ့တဲ့ လူထုစဈတမျး တခုမှာတော့ စဈတမျးမှာ ပါဝငျသူ ၈၃ % အမြားစုက ထောကျခံတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခြိနျတညျးမှာလညျး ဘုရငျမကွီး နရောမှာ သားတျော အိမျရှစေံ့ ခြားလျဈ မငျးသား အရိုကျအရာ ဆကျခံမှာကို အထူးသဖွငျ့ လူငယျတှကေတော့ လကျမခံခငျြ ကွပါဘူး။ ဝငျဆာမွို့မှာ နထေိုငျတဲ့ အသကျ ၂၀ အရှယျ Margrux Butler က ခုလို ပွောပါတယျ။
“တျောဝငျမိသားစု ရှိခွငျး မရှိခွငျးအပျေါ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ခံစားခကျြ သိပျမရှိပမေဲ့ ခြားလျဈမငျးသားနဲ့ ပတျသကျလို့တော့ အငွငျးပှားစရာ တခြို့ ရှိပါတယျ။ တခွား လူငယျတှေ အမြားအပွားလညျး ဒီလိုပဲ ခံစားရမှာပါ။ လူကွီးတှေ ကတော့ ဒီလောကျ ဖွဈခငျြမှ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ ကမြ စကားပွောဖူးတဲ့ သူတှထေဲမှာတော့ ခြားလျဈ ကို ကွိုကျတဲ့သူ မရှိသလောကျပါပဲ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောရရငျ ကမြကတော့ ဆောရီးပါ။ လကျမခံပါဘူး။”
လနျဒနျမွို့သား Jacob Appirah ကတော့ ဗွိတိနျမှာ တျောဝငျမိသားစု ဆကျ ရှိသညျဖွဈစေ မရှိသညျ ဖွဈစေ သူ့အတှကျတော့ ဘာမှ မထူးခွားဘူးလို့ ပွောပါတယျ။
"ကနြေျာ့အတှကျကတော့ ဘယျလို ပွောရမလဲ ကနြျောတို့အပျေါ သကျရောကျမှု တစုံတရာ ရှိစမေယျ့ လုပျရပျမြိုး၊ သူ့ကွောငျ့ တငျ့တယျ သှားရတယျ ဆိုတာမြိုး ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ သူ ရှိရှိ မရှိရှိ ကနြျော ကတော့ ဂရု မစိုကျပါဘူး။”
ဒါပမေဲ့ ဘုရငျမကွီးနဲ့ တျောဝငျမိသားစု ရှိနတေဲ့အတှကျ ဗွိတိနျကို တခွား နိုငျငံတှနေဲ့မတူ ထူးခွားစပွေီး ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှား လုပျငနျးအတှကျပါ အကြိုးအမွတျ ရှိစတေယျလို့မွငျတဲ့ လူငယျတခြို့လညျး ရှိပါတယျ။
“တျောဝငျမိသားစု ရှိတာနဲ့ပတျသကျလို့တော့ ကောငျးတာတှလေညျး အမြားကွီး ရှိတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ယူကရေဲ့ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှား လုပျငနျးအတှကျ အကြိုးအမွတျ အမြားကွီး ရစတော ရှိသလို၊ တျောဝငျမိသားစုနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ ထူးခွားတဲ့ သမိုငျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ကမြကတော့ တိုးတကျတဲ့ အမွငျနဲ့ ကွညျ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖကျြလိုကျဖို့ ဆိုတာမြိုးတော့ သဘောမတူပါဘူး။”
တျောဝငျမိသားစု သတငျးတှေ ဖျောပွလရှေိ့တဲ့ HELLO! မဂ်ဂဇငျး အယျဒီတာ Emily Nash ကလညျး ဗွိတိနျမှာ ဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ လို ခနျ့ညားထညျဝါပွီး လေးစားဂုဏျယူစရာ ကောငျးတဲ့ ဘုရငျတပါး ရှိနတေဲ့အတှကျ ပွညျသူတှကေို စိတျခမျြးသာမှု ရစတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
"ဘုရငျမကွီး ရှိနတေဲ့အတှကျ လူတှေ စိတျခမျြးသာမှု ရစတေယျလို့ ကမြကတော့ ထငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ တညျရှိမှုက ကမြတို့ အမြားစုရဲ့ သကျတမျးထကျကို ပိုပါတယျ။ ကမြတို့ အားလုံး ဘဝတှေ အတှကျ သူ ရှိခဲ့ပါတယျ။ တိုငျးပွညျမှာ ခကျခဲတဲ့ အခြိနျတှေ၊ မငွိမျသကျတဲ့ အခါမြိုးတှတေိုငျးမှာ သူက တညျတညျငွိမျငွိမျ ရပျတညျပေးခဲ့ပါတယျ။ တကယျတမျးဆို သူ့အတှကျက သူ့ကို ထောကျခံမယျ့ မဲဆန်ဒရှငျတှရေဲ့ မကျြနှာကွညျ့နရေတဲ့သူမြိုး မဟုတျသလို၊ ကိုယျ့ရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး ရုပျရှငျ၊ ဓာတျပွား စသဖွငျ့ အောငျမွငျမှု အရှိနျ ဆကျထိနျးနရေတဲ့ သူမြိုးလညျး မဟုတျပါဘူး။ လုပျသငျ့တာကိုပဲ လုပျတဲ့သူပါ။ ငိုပွ ရယျပွ ဒရမျမာတှေ မလုပျဘဲ ကိုယျ့တာဝနျကို မညညျးမညူ ထမျးရှကျတဲ့ သူမြိုးပါ။ ဒါကွောငျ့လဲ လူတှကေ သူ့ကို လေးစားခဈြခငျကွတာပါ။”
တျောဝငျမှုသားစု တညျရှိမှုနဲ့ပတျသကျလို့ လူငယျတှကွေား မေးခှနျးထုတျမှုတှေ ရှိတယျ ဆိုပမေဲ့လညျး၊ လူကွီး လူလတျပိုငျး အရှယျတှကွေားမှာတော့ ဘုရငျမကွီးနဲ့အတူ တျောဝငျမိသားစုကို ထောကျခံသူတှကေ အခိုငျအမာ ရှိနဆေဲပဲလို့ ပွောရမှာပါ။
“ကနြျော ကတော့ တျောဝငျမိသားစုကို ထောကျခံပါတယျ။ ကနြေျာ့ အသကျအရှယျနဲ့ ဒီအခွအေနမှော နသေားကနြတော၊ ဒီစနဈအတိုငျး ကွီးပွငျး လာခဲ့တာတှကွေောငျ့ တျောဝငျမိသားစုကို လေးစားပါတယျ။ လကျရှိမှာ York နယျစား (မငျးသား Andrew) နဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပွဿနာတှေ၊ မငျးသား ဟယျရီနဲ့ မဂေနျ တို့နဲ့ဖွဈတဲ့ ပွဿနာတှေ တော့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အရေးကွီးတာက ဒီတျောဝငျမိသားစုဟာ ကနြျောတို့နဲ့ နှဈပေါငျး ရာတှနေဲ့ခြီ ရှိခဲ့တဲ့ သူတှပေါ။ ဒီ့ထကျ ပိုရှိနလေို့လညျး ရသေးတယျလို့ ကနြျောကတော့ ထငျပါတယျ။”
အသကျ ၇၀ အရှယျ ဘာမငျဟနျ မွို့သား Bromley Johns ပွောသှားတာပါ။ အလားသူ အသကျ ၇၆ နှဈအရှယျ နောကျထပျ ဘာမငျဟနျမွို့သား တဦးဖွဈတဲ့ Richard Brotherton ကလညျး ဘုရငျမကွီး ကံကုနျသှားရငျတောငျ တျောဝငျမိသားစု ကတော့ ဆကျရှိနေ သငျ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
"တခြိနျက ခမညျးတျောရဲ့ အရိုကျအရာကို ဘုရငျမကွီး ဆကျခံ ခဲ့သလိုပဲ၊ အခု ခြားလျဈ မငျးသားက ဘုရငျမကွီးရဲ့ အရိုကျအရာကို ဆကျ ခံရမှာပါ။ အဲ့ဒီလို ဆကျခံရမယျ့အခြိနျမှာ သူ အသကျရှငျလကျြ ဆကျရှိနဦေးမယျ ဆိုရငျပေါ့ဗြာ။”
ဘုရငျမကွီး သကျတျော ကွီးရငျ့လာတာနဲ့အမြှ အိမျရှစေံ့ ခြားလျဈမငျးသား ထီးနနျး ဆကျခံဖို့အတှကျ ပွငျဆငျမှုတှေ ကတော့ အခု ကတညျးက ရှိနပေါပွီ။ မငျးသား ခြားလျဈ ဘုရငျဖွဈလာတဲ့အခါ ကွငျယာတျော ကမီးလာ ကို မိဘုရားအဖွဈ တငျမွှောကျဖို့မှာ လကျထပျ ထိမျးမွားခွငျးဆိုငျရာ နနျးတှငျးဥပဒအေရ လကျမခံတဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ အငွငျးပှားမှုတှေ ရှိနသေေးပမေဲ့လို့၊ ဘုရငျမကွီးကတော့ သူ့ သဘောဆန်ဒ ပွောရရငျ Cornwell မွို့စားကတျော ကမီးလာ ကို မိဘုရား တငျမွှောကျစခေငျြပါတယျလို့ သူ့ရဲ့ နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့ခြိနျမှာ ထုတျဖျော ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ မငျးသမီး ဒိုငျယာနာ ကှယျလှနျပွီးနောကျပိုငျး ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ ခြားလျဈမငျးသားနဲ့ ကွငျယာတျော ကမီးလာတို့ အရပျဘကျ ဥပဒနေဲ့အညီ လကျထပျခဲ့ကွပမေဲ့၊ တျောဝငျနနျးတှငျး ဥပဒအေရ သူတို့နှဈဦး ထိမျးမွားမှုက တရားမဝငျတာကွောငျ့ ခြားလျဈမငျးသား အနနေဲ့ ဘုရငျဖွဈလာရငျတောငျ ကွငျယာတျော ကမီးလာကို မိဘုရားမွှောကျဖို့မှာ အဟနျ့အတားတှေ ရှိနတောပါ။
တျောဝငျမိသားစု အနာဂတျနဲ့ပတျသကျလို့ အခွအေနတှေေ ဘယျလိုပဲ ရှိနပေါစေ၊ လောလောဆယျမှာတော့ နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့သှားတဲ့ ဘုရငျမကွီး အဲလျဈဇဘကျသျ အတှကျ ဂုဏျပွု အခမျးအနားတှကေို ဒီနှဈ ဇှနျလထဲမှာ ခမျးခမျးနားနား ကငျြးပသှားဖို့ တျောဝငျမိသားစုတှေ ရော၊ ဘုရငျမကွီးကို ခဈြခငျလေးစားကွတဲ့ ပွညျသူတှရေော ပွငျဆငျနကွေပါတယျ။ ဒီလို ပွငျဆငျနကွေသူတှေ ထဲမှာ Windsor & Eton ဘီယာခကျြစကျရုံ ညှနျကွားရေးမှူး Will Calvert လညျး ပါ ပါတယျ။
"သခြောတာကတော့ ဒါက ဝငျဆာ နနျးတျောတခုတညျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ အခမျးအနား မဟုတျပါဘူး။ ဝငျဆာက အဓိက ကတြာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအခမျးအနားဟာ တနိုငျငံလုံး၊ ဓနသဟာရ ပွညျထောငျ အားလုံးနဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ လာမယျ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ အထိ သတိရနစေမေယျ့ အခမျးအနားတှေ ဖွဈအောငျ ကနြျောတို့ အားလုံး ဝိုငျးဝနျး ပံ့ပိုးဆောငျရှကျကွရမှာပါ။”
နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ပွညျ့ အတိပွညျ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၆ ရကျနေ့ တုနျးကလညျး ဘုရငျမကွီးအတှကျ အထိမျးအမှတျ အခမျးအနား တရပျကို အိမျရှမေ့ငျးသား ခြားလျဈက ဦးဆောငျကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ ဗွိတိနျဝနျကွီးခြုပျ ဘောရဈဂြှနျဆငျ အပါအဝငျ နိုငျငံရေး အသိုငျးအဝိုငျးက အထငျကရ ပုဂ်ဂိုလျတှေ၊ ဘာသာရေး ခေါငျးဆောငျတှေ တကျရောကျခဲ့ကွပွီး ဘုရငျမကွီးရဲ့ အမြားအကြိုးဆောငျ ရညျတညျမှုတှေ အတှကျ ခြီးကြူး ဂုဏျပွုခဲ့ကွပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ တျောဝငျမိသားစုအတှငျး ပွဿနာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ မေးခှနျးထုတျမှုတှေ၊ ဝဖေနျမှုတှေ ဘယျလိုပဲ ရှိနပေါစေ… နနျးသကျ နှဈ ၇၀ ကို အောငျအောငျမွငျမွငျ ဖွတျသနျးလာခဲ့တဲ့ ဘုရငျမကွီး အဲလိဈဇဘကျသျ ကိုတော့ ဗွိတိနျပွညျသူ အမြားအပွားက ကွညျညို လေးစား အားထားကွဆဲ ဖွဈတယျဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျ အမြိုးသမီးကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲရပျနားခှငျ့ ပွုပါရှငျ။ ကမြ ခငျဖွူထှေးပါ။